UYIGCINA NJANI I-BANDWIDTH YAKHO KWIWINDOWS 10 - ITHAMBILE
Uyigcina njani i-bandwidth yakho kwiwindows 10
Uyigcina njani i-bandwidth yakho kwiwindows 10: Windows 10 yazisa ifayile ye- Uhlaziyo lweWindows lokuHanjiswa koNikezelo , apho ikhompyuter yakho inokufumana uhlaziyo okanye ithumele uhlaziyo kwiikhompyuter ezingabamelwane okanye kwiikhompyuter kwinethiwekhi yakho. Oku kwenziwa ngoncedo lokunxibelelana koontanga. Nangona oku kuya kuthetha ukuba ufumana uhlaziyo ngokukhawuleza okukhulu, iya kukushiya ngasemva ngamatyala amakhulu ebhendi.
Unako kwakhona ukuseta uqhagamshelo lwakho njengemitha
Ke masibone ukuba ucima njani uHlaziyo loNikezelo loVavanyo lweWindows:
1.Cofa kwiqhosha leWindows kwaye uvule useto lweWindows.
2.Cofa kwi Uhlaziyo kunye noKhuseleko.
3 Phantsi koHlaziyo lweWindows, cofa Iinketho eziphambili kwicala lasekunene le Window.
4.Cofa kwi Khetha indlela uphuculo oluhanjiswa ngayo kwaye emva koko ushenxise isilayida usiya kwindawo evaliweyo, ukukhubaza ukuPhuculwa koPhuculo lweeWindows okanye iWUDO.
Shenxisa isilayida sicinyiwe ukuze iPC yakho ingabinakho ukukhuphela uhlaziyo naphina ngaphandle kweeseva zikaMicrosoft; ukuba ucinga ukuba unganakho ukukhuphela uhlaziyo kwiiPC kwikhompyuter yakho, gcina isilayida kwindawo ye-ON kwaye ukhethe iiPC kwiNethwekhi yaseKhaya yaseKhaya
Cimile : Oku kukhubaza indawo yokwabelana ngedatha ngokupheleleyo. Uyakukhuphela kuphela uhlaziyo njengoko ubuqhele ukuya kwiiseva zikaMicrosoft.
Ii-PC zenethiwekhi yam yendawo Ewe, olu lolona khetho lufanelekileyo endiza kulucebisa kuba olu khetho lukuvumela ukuba wabelane ngohlaziyo lukaMicrosoft kwikhaya lakho okanye kwinethiwekhi yomsebenzi. Ngamanye amagama, kuya kufuneka ukhuphele uhlaziyo kwenye yePC yakho eqhagamshelwe kwikhaya lakho iWifi kwaye zonke ezinye iiPC ezixhumeke kwinethiwekhi efanayo ziya kufumana uhlaziyo ngaphandle kokusebenzisa i-intanethi. Ke olu khetho ngobuchwephesha lugcina idatha yakho kunokuba uyisebenzise.
Ii-PC zenethiwekhi yam yendawo, kunye neePC kwi-Intanethi : Olu khetho lolona lubi kakhulu kuba luya kusebenzisa iPC yakho ukulayisha uhlaziyo lukaMicrosoft ukuze omnye umsebenzisi akwazi ukukhuphela uhlaziyo ngokukhawuleza kwaye yintoni enye ekhethwe ngokungagqibekanga. Ewe, iMicrosoft ifumene ngobuqili indlela yokugcina i-bandwidth yabo kuba befumana uhlaziyo kwi-intanethi yakho kwaye ayilunganga kwaphela.
Ii-PC ezikwi-Intanethi zikhethwe ngokungagqibekanga kwaye zisetyenziselwa uHlaziyo loNikezelo loPhuculo lweWindows. Unokukhetha olu khetho ukuba unqwenela ukufumana uhlaziyo ngokukhawuleza kwaye ungakhathali ukubhatala imali ethe kratya kunxibelelwano lweemitha.
Ukuba ufuna ukugcina idatha engaphezulu kunokuba unokuseta uqhagamshelo lwakho lwe-wifi njengonxibelelwano lweemitha. IWindows ayizukufaka uhlaziyo kunxibelelwano lweemitha kodwa ayizukukhuphela ngokuzenzekelayo uhlaziyo lweWindows, ke kuya kufuneka ukhuphele uhlaziyo ngesandla.
Ukuseta inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi yangoku njengonxibelelwano lweMitha, Yiya kuseto lweWindows kwaye ucofe iNethiwekhi kunye ne-Intanethi> iWi-Fi> Lawula iiNethiwekhi ezaziwayo.
Khetha inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi kwaye ucofe iiProperties. Ke phantsi kokusetwa njengonxibelelwano olulinganisiweyo ukutshintsha isilayida ukuya kwi-On. Inethiwekhi yangoku ye-Wi-Fi iya kuba luqhagamshelo lweMitha.
Yiyo leyo, ufunde ngempumelelo indlela yokugcina umda wendlela yakho ngaphakathi Windows 10 kodwa ukuba usenemibuzo malunga nesi sithuba uzive ubabuza kwicandelo lamagqabaza.
Eyona midlalo mikhulu yexesha lonke
Umqhubi-irql-hayi-ongaphantsi okanye olinganayo
Impazamo yokubulala ngokuthe ngqo yenzekile ffxiv
Umqhubi irql akalingani okanye ngaphantsi
windows 10 iiapps azizukuvula i2019
setha kwakhona kwaye ubhalise kwakhona izinto zokuhlaziya iiwindows
windows 10 isixhobo sakho sifuna uhlaziyo lwamva nje lokhuseleko